WARBIXIN: Kroos ilaa Wanyama: 6 Xiddig Oo Diirada U Saaran Man United Xilli Ay Doonayaan Laba Xiddig Oo Khadka Dhexe Ah Oo Ay Ku Badalan Carrick & Fellaini – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Kroos ilaa Wanyama: 6 Xiddig Oo Diirada U Saaran Man United Xilli Ay Doonayaan Laba Xiddig Oo Khadka Dhexe Ah Oo Ay Ku Badalan Carrick & Fellaini
WARBIXIN: Kroos ilaa Wanyama: 6 Xiddig Oo Diirada U Saaran Man United Xilli Ay Doonayaan Laba Xiddig Oo Khadka Dhexe Ah Oo Ay Ku Badalan Carrick & Fellaini
Tababaraha kooxda Man United Jose Mourinho ayaa sheegay baahida ay kooxdiisu u baahantahay in ay xagaaga keento laba xiddig oo khadka dhexe ah.
Man United ayaa waayi doonta xiddiga khadka dhexe ee Michael Carrick kaas oo ciyaaraha ka fariisan doona kuna biiri doono shaqaalaha tababaraha Old Trafford halka Marouane Fellaini si xor ah uga tagi doono kooxda.
Mourinho ayaa doonaya xiddig uu ka garab ciyaarsiiyo xiddiga khadka dhexe ee Nemanha Matic tartana la gala xiddiga khadka dhexe ee Paul Pogba.
Hadaba waxa aan warbixintan ku soo bandhigi doonaa 5 xiddig oo uu wargayska Daily Mail sheegay in uu Jose Mourinho u dhaqaaqi karo saxiixooda qaar ka mid ah.
JEAN MICHAEL SERI: Xiddigan ayaa ku dhawaaday in uu ku biiro kooxda Barcelona sanadkii hore waxana haatan si weyn loola xiriirinayaa kooxaha Man United iyo Man city, Seri ayaa ah xiddig 26 jir ah una ciyaara xulka qaranka Ivory Cost waxana uu ku fiican yahay baaska sidoo kale waa xiddig orod badan oo ku raaxaysta ciyaarista kubada cagta.
SERGEJ MILINKOVIC SAVIC: Xiddigan ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku jira xilli ciyaareedkan isaga oo leh awood iyo waliba xirfad cajiib ah, 23 jirkan ayaa Nemanja Matic kahadka dhexe ee xulka qaranka Serbia ka garab ciyaara, Xiddiga ayaa sidoo kale lala xiriirinayaa kooxaha Chelsea,Real Madrid,Juventus iyo kooxo badan oo reer yurub ah.
JORGINHO: Waa xiddig dhalasho ahaan ka soo jeeda Brazil laakiin qaatay baasaboor Italy ah waxana doorbidayaa in uu ku biiro kooxda Liverpool si uu badal ugu noqdo Emre Can laakiin waxa ay Man United kula biiri kartaa tartanka xiddiga, 26 jirkan ayaa ka mid ah xiddigaha furaha u ah qaab ciyareedka kooxda Napoli ee xilli ciyaareedkan xilli ay hogaanka u hayaan horyaalka Italy.
TONI KROOS: Waa xiddig laf dhabar ka ah kooxda Real Madrid laakiin waxa uu xiiso u qabaa in uu qaato tartan cusub, xiddigan reer Germany ayaa ku dhawaaday in uu ku soo biiro United wakhtigii David Moyes laakiin waxa uu ugu dambayn ku biiray Real waxana uu noqon karaa xiddiga ugu haboon ee badali kara Carrick marka loo eego khibradiisa.
VICTOR WANYAMA: United iyo Liverpool ayaa si gaar ah ula socda todobaadyadii ugu dambeeyay xiddiga reer Kenya kaas oo aan si joogto ah ugu ciyaarin kooxda Tottenham, labada kooxoodba waxa ay 26 jirkan u yihiin taageero weyn waxana la rumaysan yahay in uu diyaar u yahay in uu ku biiro koox weyn hadii uuna Tottenham boos joogto ah ka helin.
WILLIAN: Jose Mourinho ayaan diidi doonin xiddig kale oo khadka dhexe ee weerarka ah hadii uu fursad u helo waxa uu u dhaqaaqi doona xiddiga Kooxda chelsea ee Willian kaas oo ah tababarihii keenay Chelsea, United ayaa suuqii January wax ka waydiisay helitaanka xiddiga laakiin chelsea ayaa wakhtigas diiday laakiin waxa laga yaabaa in ay iska iibiso xagaaga dambe.